Agha Nchọgharị: Internet Explorer na-aga n'ihu na-efunahụ Firefox, Kedu ihe bụ Safari? | Martech Zone
Pịa chaatị ka ị hụ nha ha zuru ezu. Ihe nchọgharị abụọ a ị na-ele anya bụ Internet Explorer na Firefox. Nchịkọta Internet Explorer zuru oke na-adaba na nkesa Internet Explorer 7 yiri ka ọ na-ahapụ n'okpuru Firefox!
Isi iyi data: W3Schools
Safari enwebeghị mmetụta ọ bụla, ọbụlagodi na ịnwale ịkwanye n'ahịa Windows. Ikekwe akụkụ nke nsogbu Safari bụ nsogbu nchekwa na ihere ozugbo ekpughere n'ime awa 2 nke nbudata ya site na Lar Holm.
IMHO, ihe iseokwu na Internet Explorer bụ naanị n'ihi ihe abụọ:
The Nchịkọta Internet Explorer gara n'ihu amaghị nke CSS ụkpụrụ. Agbanyeghị na ọ nwere ike ịdị ka nke a ọ ga - abụ obere pasent nke ndị bi na ya, ọ bụ ndị mmadụ nwere ike ị kachasị mkpa na ha na - ekewapụ - ndị mmepe ahụ.
Enwere m ike ịda dịka m kpọrọ Internet Explorer asị, mana m na-eji ya kwa ụbọchị. O yiri ka ọ na-arụ ọrụ nke ọma na, mgbe etinyere hacks peeji, nsụgharị nke ibe ndị ahụ mara mma. M na-agbasi mbọ ike na ojiji nke ngwa ahụ, n'agbanyeghị, ozugbo m nwara iji menu. Ọnọdụ nzuzu nke menus n’aka nri bụ ntụpọ bụ isi. Lelee ngwa ọ bụla na menu niile na-etinye aka ekpe, ọ bụghị n'aka nri.
Emechara m kwadoo Vista na nwa m nwoke, bụ́ Bill, ọhụrụ iti mkpu PC na m ga-agwa gị na interface bụ dazzling, karịsịa na Aero mmetụta na-agba ọsọ. Bill nwere ike ịwụnye Office 2007 maka ụlọ akwụkwọ na m hụrụ n'anya sistemụ ribọn. Ọ nwere ike iwe m oge iji chọpụta ebe ihe niile dị - mana ka ọ dị ugbu a, a na-etinye atụmatụ nke ọ bụla na njiri mara mma nke na-anọchi anya ihe ahụ.
Nyere Ahụmahụ Ndị A na Usability nkwalite ndị a na-arụ na ngwaahịa Microsoft, o juru m anya na ndị otu Internet Explorer agbanyebeghị oku maka enyemaka.
Egela m ntị, n'agbanyeghị… naanị lekwasị anya na ọnụ ọgụgụ.
Jiri ngwa Google jiri ngwa Google wulite nke gi
Aug 23, 2007 na 11:14 PM
Kedu stats na-anọchi anya na eserese gị? Nke ahụ ọ bụ ebe nrụọrụ weebụ gị? Saịtị stats?
Kedu ihe bụ isi maka data a?
Anọ m na-agụ n'oge na-adịbeghị anya na Lifehacker na-ekwu na w3schools stats adịghị mma n'ihi na ha niile lekwasịrị anya na ndị na-eme webụsaịtị - nke bụ ọnụọgụ dị elu nke nnabata firefox karịa nke ndị ọzọ.
Egwubeghi otutu n’ime ya.
Dean @ Nka na ụzụ ọkọ
Anụla m na nkọwa ahụ kwa gbasara imewe weebụ. Mụ onwe m na-eji Firefox ọ bụ ezie na mgbe ụfọdụ, ntụgharị bụ ihe a na-apụghị izere ezere, ọkachasị mgbe ịmalitere iji ngwaahịa Microsoft ndị ọzọ dịka SharePoint.
Daalụ maka nnukwu blog gị.
Ọ ga-amasị m ịmata ebe ọnụ ọgụgụ ndị a sitere n'ihi na Mozilla Foundation kwuru na izu ole na ole gara aga na ha nwere olile anya 30% na 2008 (june).
Ndị a stats si W3Schools. Ndo na enweghị m nke ahụ na post! Ejiri m ya ọhụrụ na ụtụtụ a.
Nathan Weinberg kwuru
Ruo mgbe stats ndị ahụ ga-amalite ijikọ weebụ n'ozuzu ha, ha apụtaghị ọtụtụ ihe. I nwekwara ike bipụta stats sava gị.
Ọ na-awụ akpata oyi n'ahụ ịhụ eserese a mgbe ị tụlere na ọtụtụ saịtị ka na-adabaghị na Firefox. Dị ka ọ dị ogologo oge onye ọrụ Firefox, nke a na-agba m ara.
Aug 24, 2007 na 6:50 PM
Ogologo oge IE6 kpọrọ b / c nke na-abụghị CSS nnabata, ọ tụrụ m n’anya n’ezie ịhụ enweghị ike IE7 ijide, n’agbanyeghi na Microsoft mere ezigbo ọrụ iji hụ na edoziri ụdị ahụhụ ahụ. Nke ahụ, tinyere eziokwu ahụ bụ na a ga-ebugharị IE7 na ndị ọrụ Windows site na Mmelite, ị ga-eche na IE6 ga-adaba (ma si otú a banye na IE7 ka ọ banye) ugbu a.
Chris Schmitt dere ederede dị mkpirikpi banyere ndịiche dị na ihe nchọgharị abụọ ahụ site na ụdị ejiji nke m tụlere na blọọgụ m Ebe a.
Aug 27, 2007 na 7:31 PM
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị, agbakwunyere m soro ihe a choputara dabere na nzaghachi ndị na-agụ akwụkwọ.
Sep 1, 2007 na 1:00 PM
N'ụzọ na-akpali mmasị, ọnụọgụ òkè IE6 na-atụgharị ntụgharị ọsọ nke IE7 .. ka anyị gụọ nke a pụtara na uto Firefox na-abịa site n'aka ndị ọrụ IE ochie? Nke a ga-abụ ihe okike na Firefox na-akawanye ndị ọrụ ntụgharị ihu iji wụfee ụgbọ mmiri, karịa ndị ọrụ na-eguzosi ike n'ihe ndị gafere ụzọ nkwalite niile nke IE4-5-6-7…